Izindaba - Ungadluliseli umlomo wegciwane enganeni
I-sali iyinkampani ethwala amagciwane, futhi manje kunezifundo eziningi. Ngesikhathi sokwelashwa, noma ngabe kusenokungabi bikho ukungaphatheki kahle, lawa mazinyo amazinyo abuye abe yindawo yokushisa eshisayo egatshelwe eRirol, la magciwane akhethekile ngeke agwemeke empilweni yawo yansuku zonke, futhi "azosabalala" emlonyeni wengane. Ilahlekile impela kulayini wokuqala. Umnakekeli angasabalalisa igciwane lesandulela ngculaza emlonyeni wengane ngokudlulisa indlela eya emlonyeni Lapho ushesha ukudlula enganeni, lapho uyidlulisa ngokwengeziwe, uyisebenzisa ngokwengeziwe. Ngakho-ke, umnakekeli kufanele anake ukondla inhlanzeko ngenkathi enaka inhlanzeko yakhe yomlomo. UMo usabalalisa ama-pathogen ezinganeni.
Umnakekeli kufanele anake lezi zimilo ezilandelayo: gwema ukuxhumana ne-pacifier yengane ukuthola ukushisa kwebhodlela lobisi ngomlomo womuntu omdala. Ungafaki isipuni emlonyeni wecala bese wondla ingane. Gwema ukuqabula ngomlomo wengane yakho. Gwema ukondla ingane yakho ngemuva kokuhlafuna ukudla, noma wabelane nge-tableware nengane yakho
Izinsiza zokuncelisa izingane njengebhodlela kufanele zihlanze futhi zibulale amagciwane, uma kungenjalo, ingane izoletha amagciwane emzimbeni, okuholele kuhudo, ukuhlanza, nakho kungadala i- "thrush". Kumele kuqashelwe ukuthi ibhodlela elingasetshenziswanga kungakapheli amahora angama-24 ngemuva kokubulala amagciwane, lisadinga ukuphinde libulawe amagciwane, ukuze lingazali amagciwane.
Amathiphu: Umuntu onakekelayo kufanele anake ukondla inhlanzeko futhi alungise izindlela zokondla ezingalungile.
Lo mbhalo uthathwe kokuthi "Izinto ezithinta izingane - Impilo Yomlomo Yezingane" (People's Health Publishing House, 2019), Ezinye izindatshana zivela kwinethiwekhi, uma kukhona ukwephulwa komthetho, sicela uxhumane no-Dele